EyeKhala 9, 2018 admin
iphepha Uphando olutsha ubona Bitcoin nendlela obanzi intlawulo ngaphakathi 10 iminyaka
Bitcoin kunye cryptocurrency zifumene inkxaso evela abaphandi Imperial College London, abathi zemali zedijithali lulungele ukuba abantwana abaninzi.
Ngokutsho iphepha elibizwa “Cryptocurrencies: Ukoyisa Izithintelo Trust kunye Ukwamkelwa” Bitcoin kunye cryptocurrencies ziya hit the mainstream njengendlela ngokuhlawula zokuthengwa kweempahla kunye neenkonzo ngaphakathi ilishumi ezayo.
I ezintathu iinqobo abaphandi ekhutshelwe ukwenziwa lwemali ukuba:
Store yexabiso: ngokuvumela abantu ukuba benze ukhetho intemporal xa ukuchitha amandla awo okuthenga
Medium of exchange: lula ukutshintshiselana kwempahla kunye neenkonzo ngokususa ongenziwanga ezinxulumene koqoqosho unaniselwano
Unit akhawunti: esebenza njengenyathelo yexabiso kule nkqubo yezoqoqosho
Ngokutsho iphepha “bethe bayifezekisa le miqathango mibini yokugqibela kuya kufuna Bitcoin kunye nezinye cryptocurrencies ukwenza inkqubela kwimingeni eseleyo efana scalability, design and ummiselo.”
Binance enikela $ 1m ezixabisa ye crypto amaxhoba zezikhukhula yaseJapan
Ukuphendula le ntlekele sezulu kulimala West Japan kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo, Changpeng Mark, CEO of Binance nabonakalisa uvelwano lwakhe kwisithuba Twitter. Isithuba kwakhona wavakalisa ukuba inkampani yakhe uya kwenza umnikelo lilingana yintengo $1 million currency alandelayo: BTC, BNB okanye JPY.
"Iintliziyo zethu aphume aye amaxhoba e West Japan. @binance iya kuqala $1,000,000 USD elingana lomnikelo nokuba BNB, BTC, okanye JPY. Nathi ukucela amaqabane ethu crypto ukuba bazibandakanye nathi nokunceda abahlobo bethu abasweleyo. "
Ingxelo Daily Market Kraken for 08.07.2018
$85.6M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje